Momba anay | ZHEJIANG KAIHUA MOLDS CO., LTD
Mpamatsy vahaolana amin'ny bobongolo plastika tanteraka
Manana foibe any amin'ny Faritany Zhejiang any Shina, Kaihua dia manana biraon'ny sampana fito manerana an'i Azia, Eropa ary Amerika, manome serivisy ho an'ny mpanjifa 280 mahery. Tamin'ny alàlan'ny tombony avo lenta sy fahombiazana amin'ny famokarana tsingerina fohy, Kaihua dia nametraka laza ho an'ny serivisy famokarana avo lenta sy mifantoka amin'ny mpanjifa nandritra ny 20 taona. Kaihua dia mirehareha amin'ny fanekena azy ho marika marika Made in China ambony.
Ny orinasan'i Kaihua dia miainga amin'ny fiara, fitaovana ara-pahasalamana ary logistika ka hatramin'ny fanaka an-trano sy ny kojakoja elektrika, mirehareha amin'ny fahaizan'ny famokarana maherin'ny 2000 lasitra isan-taona. Miaraka amin'ny fananana mitentina mihoatra ny 850 tapitrisa RMB, fampisondrotana isan-taona ny fisondrotana 25%, mpiasa 1600, ary kojakoja fanamboarana roa mihoatra ny 10.000 metatra toradroa, Kaihua dia tsy mpanamboatra mould ambony fotsiny ao Shina, fa iray amin'ireo mpamatsy bobongolo lehibe indrindra manerantany .
Niorina tamin'ny taona 2000 avy amin'i Daniel Liang, Kaihua dia nanjary iray amin'ireo mpamatsy lasitra plastika tsindrona tsara indrindra eran'izao tontolo izao, manome serivisy amin'ny famolavolana, fanamboarana, famokarana ary fivondronan'ny fitaovana avo lenta.
Miaraka amin'ny fahaizan'ny famokarana bobongolo isan-taona mihoatra ny 1,600 set, mpiasa mihoatra ny 650, ary ny velaran'ny velaran-tany 42000 metatra toradroa, ny base Huangyan dia mizara ho fizarana efatra samihafa izay misy ny fizarazarana Logistic, fizarana ara-pahasalamana, fizarana otomotif, fizarana ao an-tokantrano ary fizarana fitaovana ao an-trano.
Miaraka amin'ny fahaizan'ny famokarana bobongolo isan-taona mihoatra ny 900 seta, mpiasa maherin'ny 500, ary mandrakotra 36000 metatra toradroa ny velarana, ny Sanmen base dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana lasitra maotera ho an'ny rafitra ivelany, ny rafitra anatiny ary ny rafitra mangatsiaka.
Kaihua Mould's 2021 “Digital Manage ...
Ny 2-3 martsa 2021, Kaihua mould "Digital ...
Fihaonambe momba ny varotra telovolana faharoa 2020 ...
Tamin'ny 8 maraina ny 5 Jolay 2020, Kaihua Mould's 2 ...
2021.3.4 Yuan Chengmao, filoha lefitry ny ...